Sakafo sy sakafo - Vondt.net
Archives sokajy: Sakafo sy sakafo
Mahaliana ny vokatry ny sakafo amin'ny fahasalamanao? Eto ianao dia hahita lahatsoratra ao amin'ny sokajy sy ny sakafo amin'ny sokajy. Miaraka amin'ny sakafo dia ahitana fanafody ampiasaina amin'ny fandrahoan-tsakafo mahazatra, anana, zavamaniry voajanahary, zava-pisotro ary lovia hafa.
- Ahoana ny fihinanana sakafo ho an'ny havokavoka mahasalama!
10 / 08 / 2016 /Fanamarihana 0/i Sakafo sy sakafo, kalitao Articles/av loza
Ny fanadihadiana navoaka tao amin'ny diary fikarohana The American Thoracic Society dia naneho fa ny fihinana ankavanana dia afaka manatsara ny fiasan'ny havokavoka sy ny havokavoka salama kokoa. Hitan'ny mpikaroka fa ny fananana sakafo avo lenta avo dia mifamatotra mivantana amin'ny fihenan'ny aretina amin'ny havokavoka.
Ny aretin'ny havokavoka dia olana lehibe any Norvezy sy manerantany. Raha ny marina, ny COPD no antony fahatelo mahatonga ny fahafatesan'ny olona eran-tany - koa raha azonao atao ny mampihena ny valan'aretina havokavoka amin'ny fihinanana fibre betsaka, ao anatin'izany ny voankazo sy legioma, dia tokony hiezaka mafy ianao handrisika ny tenanao sy hikatsaka izany.
Ny fampidirana sery mifamatotra amin'ny fahasalaman'ny havokavoka
Lehilahy sy vehivavy 1921 no nandray anjara tamin'ny fandinihana - indrindra tamin'ny sokajy 40-70 taona. Ny fandinihana dia nandinika ireo anton-javatra miovaova toa ny satan'ny fiaraha-monina, fifohana sigara, lanja ary toetry ny fahasalamana alohan'ny hanombohana ny fianarana. Rehefa avy nanangona angon-drakitra izy ireo dia nizara ny mpandray anjara arakaraka ny fidiran'ny fibre ho vondrona ambony sy ambany. Ny vondrona ambony dia nandany fibre 17.5 grama isan'andro isan'andro raha oharina amin'ny vondrona ambany izay tsy nihinana afa-tsy 10.75 grama. Na dia taorian'ny nanitsiana ny valiny araka ny anton-javatra miova aza dia azo lazaina fa ilay vondrona manana votoatin'ny fibre avo kokoa dia nanana fahasalaman'ny havokavoka kokoa ihany koa. Manana fampidirana ve ianao? Ampiasao ny sahan-kevitra etsy ambany na ny anay Facebook Page.
Mazava sy mazava ny vokatra naterany
Anisan'ireo vondrona ambony manana fatra 17.5 grama isan'andro, voamarika fa 68.3% no nanana fiasan'ny havokavoka mahazatra. Ao amin'ny vondrona ambany kokoa miaraka amin'ny fihinanana fibre ambany dia hita fa 50.1% no manana fiasan'ny havokavoka mahazatra - misy fahasamihafana mazava eo. Ny trangan'ny fameperana havokavoka dia avo kokoa ihany koa tao amin'ny vondrona misy atiny fibra ambany - 29.8% raha 14.8% amin'ny vondrona hafa. Raha lazaina amin'ny teny hafa: andramo ny mihinana sakafo isan-karazany, izay ahitana legioma, voankazo ary singa hafa manana votoatin'ny fibre avo indrindra.
Ahoana no mahatonga ny fibre hamokatra havokavony mahasalama kokoa?
Ny fandinihana dia tsy afaka nilaza tamim-pahalalana 100% ny antony mahatonga ny fibre hanome fahasalaman'ny havokavoka tsaratsara kokoa, saingy mino izy ireo fa mifamatotra amin'ny toetra fanoherana ny inflammatoire an'ny fibre. Mino ihany koa izy ireo fa noho ny antony mahatonga ny fibre handray anjara amin'ny fanatsarana ny tsinay tsinay - izany koa dia hiantohana ny fanatsarana ny valin'ny fiarovan'ny vatana amin'ny aretina. Ny fivontosana dia fototry ny ankamaroan'ny aretin'ny havokavoka, ary ny fihenan'ny fihenan'ity valiny mamaivay ity dia mety hisy fiatraikany mivantana amin'ny fahasalaman'ny havokavoka. Ny votoatin'ny fibra avo lenta amin'ny sakafo dia mifandray amin'ny fihenan'ny CRP (Proteinina C-reactive) atiny - izay mpamily fitomboan'ny fivontosana.
Raha fintinina, 'Mihinana voankazo sy legioma bebe kokoa!' ny faran'ity lahatsoratra ity. Mino ihany koa ireo mpikaroka fa tsy tokony hiraharaha ny fanafody sy ny fanafody isika satria io ihany no fitsaboana tokana mikendry ny aretin'ny havokavoka ary mifantoka amin'ny fahalalana sy fisorohana ny fihinanana sakafo. Ny sakafo mahasalama dia mazava ho azy fa tokony ampiarahina amin'ny fanatanjahan-tena sy fampitomboana fanatanjahan-tena amin'ny fiainana andavanandro. Raha te-hamaky ny fandalinana iray manontolo ianao dia hahita rohy eo amin'ny faran'ny lahatsoratra.
Aza misalasala mizara ity lahatsoratra ity amin'ny mpiara-miasa, namana ary olom-pantatra. Raha mila lahatsoratra, fanazaran-tena na ny toy izany ianao alefa toy ny antontan-taratasy misy famerimberenana sy ny toy izany, manontany anao izahay toy ny ary mifandraisa amin'ny alàlan'ny pejy Facebook eto. Raha manana fanontaniana ianao dia manisy fanamarihana mivantana amin'ny lahatsoratra na mba hifandraisana aminay (tena maimaimpoana) - hanao izay tratry ny herinay izahay.
ARTIKA POPULAR: - Ny fitsaboana Alzheimer vaovao dia mamerina amin'ny laoniny fahatsiarovana feno!
ANDRAMO IZAO: - Fanatanjahan-tena 6 hiadiana amin'ny sciatica sy sciatica diso
Vakio koa: - Fanatanjahantena 6 mahomby amin'ny lohalika mandavantaona
Fantatrao ve fa: - Ny fitsaboana mangatsiaka dia afaka manome fanaintainana fanaintainana amin'ny hozatra sy hozatra? Ankoatra ny zavatra hafa, Biofreeze (azonao atao ny manafatra azy eto), izay ahitana vokatra voajanahary indrindra, dia vokatra malaza. Mifandraisa aminay androany amin'ny alàlan'ny pejinay Facebook raha manana fanontaniana ianao na mila soso-kevitra.
- Mila fanazavana bebe kokoa ve ianao sa manana fanontaniana? Angataho ny mpiasan'ny fahasalamana mahay (maimaim-poana) amin'ny alàlanay Facebook Page na amin'ny alàlan'ny «ASANINA - TSARA VONONA!"-toerana.
VONDT.net - Asao ny namana tianao ho tia ny tranokalanay:
Iray isika maimaim-poana ny fanompoana izay azon'i Ola sy Kari Nordmann mahazo valiny amin'ny fanontaniany momba ny olana ara-pahasalamana musculoskeletal - tsy fantatra anarana raha maniry izany izy ireo.
Azafady mba tohano ny asanay amin'ny fanarahana anay sy fizarana ny lahatsoratra ato amin'ny media sosialy:
- Araho azafady ny Vondt.net amin'ny YOUTUBE
- Araho azafady ny Vondt.net amin'ny FACEBOOK
(Izahay dia manandrana mamaly ny hafatra rehetra sy ny fanontaniana ao anatin'ny 24 ora. Ianao no misafidy na tianao ny valiny avy amin'ny kiropraktika, kiropraktika biby, mpitsabo ara-batana, mpitsabo ara-batana miaraka amin'ny fampianarana mitohy amin'ny fitsaboana, dokotera na mpitsabo. izay mifanentana amin'ny olanao, manampy anao hahita mpitsabo natoraly, handika ny valin'ny MRI sy ireo olana mitovy. Miresaha aminay anio mba hiantso am-pirahalahiana)
Saripika: Wikimedia Commons 2.0, Creative Commons, Freemedicalphotos, Freestockphotos ary nandefa fandraisana anjara tamin'ny mpamaky.
Ny fifandraisan'ny tsindrin'ny sakafo sy ny fiasan'ny havokavoka amin'ny NHANES, Corrine Hanson et al., Tantara ao amin'ny American Thoracic Society, doi: 10.1513 / AnnalsATS.201509-609OC, navoaka an-tserasera 19 Janoary 2016, abstract.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Lunger.jpg?media=1648573622 435 700 loza https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 loza2016-08-10 20:25:092022-03-18 17:27:23- Ahoana ny fihinanana sakafo ho an'ny havokavoka mahasalama!
Cherry Lowers Ny fahitana ny Gout
02 / 08 / 2016 /Fanamarihana 0/i Sakafo sy sakafo, kalitao Articles/av loza
Ny fanadihadiana navoaka tao amin'ny diary fikarohana momba ny aretin-tsaina sy rheumatism dia naneho fa ny fihinana serizy dia mety hisy vokany manasitrana, ankoatry ny zavatra hafa, ny gout. Ny fihinanana sakana vao 2 andro (!) Nandritra ny taona dia nitarika ny fihenan'ny 35% izay mety hampitombo ny gout.
Gout dia iray amin'ireo endrika mahazatra indrindra amin'ny vanin-taolana - io gout io dia vokatry ny asidra urika be loatra ao amin'ny vatana. Ny fitomboan'ny fitrandrahana asidra urik ao amin'ny vatana dia mety hitarika kristaly asidra am-bavony amin'ny tonon-taolana, matetika ao amin'ny tongotra lehibe. Fanamboarana asidra uric (antsoina hoe tophi) izay toy ny gony kely eo ambanin'ny hoditra.
Fandalinana manan-danja hanehoana ny vokatry ny famatsiana fanafody voajanahary
Betsaka ny famenon-tsakafo voajanahary no afaka manao zavatra mitovy amin'ny pilina fotsy boribory sy fanafody - tsy misy voka-dratsy. Ity fandinihana ity dia naneho fa ny serizy, noho ny habetsahan'ny antioxidant sy ny vokatra voajanahary fanoherana ny inflammatoire, dia manana andraikitra amin'ny fitsaboana sy ny fisorohana ny endrika gout - ao anatin'izany ny gout.
Nanaraka ny mpandray anjara mihoatra ny 1 taona ny fandinihana
Ny fanadihadiana dia nanombantombana mpandray anjara 633 nandritra ny taona kalandrie iray manontolo. Notohizan'izy ireo ny teboka toy ny soritr'aretina, ny trangan-javatra, ny antony mety hampidi-doza, ny fanafody ary ny voajanahary, ny fandraisana serizy - na ny karazana fampiasa (voajanahary mifanohitra amin'ny nalaina) ary isaky ny impiry. Nanapa-kevitra ny mpikaroka fa antsasaky ny kaopy iray na serizy 10-12 ny serizy iray.
Serasera sakana = Kely azo atao gout
Rehefa nanara-dia ny vondrona izy ireo rehefa afaka 1 taona, nasehon'ny antontan'isa fa ireo izay nihinana serizy - raha kely ny servings 2 tao anatin'ny herintaona - dia 35% ny vintana mety hiverenana indray ary hanangana gout. Hita voajanahary fa ny fihinanana serizy lehibe kokoa - rehefa mandeha ny fotoana - dia mifandray amin'ny fihenan'ny gout ihany koa. Rehefa natambatra ny fihinanana serizy tamin'ny allopurinol (fanafody mampihena ny atin'ny asidra urika) dia hitanao ny fihenan'ny 75% tamin'ny fanafihana gout.
Zava-dehibe ny sakafo ho an'ireo mijaly amin'ny gout. Ny olona manana Diagnostika gout dia tokony hifantoka amin'ny fihinanana sakafo anti-inflammatoire sy fihinanana diet antioksidants. Manantena fitsapana lehibe kokoa noho ny kisendrasendra izahay, hahazoana antoka fa tena afaka manao inona ny serizy ho an'ireo manana gout - fa tsy maintsy holazainay fa tena mampanantena!
Vakio koa: - Fanatanjahan-tena 6 hanoherana an'i sciatica
Zhang et al, Fanjifana Cherry sy ny loza ateraky ny fanafihana gout miverimberina
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Kirsebær.jpg?media=1648573622 466 700 loza https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 loza2016-08-02 14:39:152022-03-18 17:26:58Cherry Lowers Ny fahitana ny Gout
Pejy 1 amin'ny 16123>»